မြန်မာပြည်မှမုန်တိုင်းသတင်းများ စုစည်းတင်ပြချက် ~ Myo Chit Myanmar
Warning! This report includes graphic content and/or disturbing images that may not be appropriate for everyone.
ဓါတ်ပုံများစုစုပေါင်း ၂၃၃ ပုံ
ရန်ကုန်မြို့မှာ ဒီနေ့မနက် ၁ နာရီကို မိုင် ၁၂၀ ကျော်နှုန်းနဲ့ ဆိုင်ကလုန်း လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီး တိုက်ခတ်သွားလို့ လျှပ်စစ်မီးများပျက်တောက်၊ မြို့တွင်း ရေကြီးပြီး ဘတ်စ်ကားနဲ့ ရထားများလည်း မထွက်နိုင်ဘဲ ရေဒီယိုနဲ့ ရုပ်သံလွှင့် အစီအစဉ်များလည်းပဲ ပြတ်တောက်သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံခြားကဝင်လာတဲ့လေယာဉ်တွေ ရန်ကုန်မှာ မဆင်းနိုင်လို့ မန္တလေးကို ပြောင်းလဲ ပျံသန်း စေရတယ်လို့ ရိုက်တာ သတင်းက ဆိုပါတယ်။ မင်္ဂလာဒုံ လေဆိပ်က ပျံသန်းမယ့် ခရီးစဉ်တွေ အားလုံးကိုလည်း ပယ်ဖျက်လိုက်ပါပြီ။ ရန်ကုန်မြို့သာမက မြန်မာပြည်ရဲ့ တခြားမြို့များကိုလည်းပဲ တယ်လီဖုန်း အဆက်အသွယ်များ ဆက်သွယ်လို့ မရနိုင်ဘဲ ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာလည်း အင်တာနက်များ ပြတ်တောက်သွားကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
ရန်ကုန်ကလာတဲ့ အေပီသတင်းထဲမှာတော့ ဒေသစံတော်ချိန် မနက် ၅ နာရီက တိုက်ခတ်သွားတဲ့ ဒီလေပြင်းမုန်တိုင်းကြောင့် အသေအပျောက်တွေ အများကြီး ရှိနိုင်တယ်၊ အပျက်အဆီးလည်း ကြီးမားနိုင်တယ်လို့ မိုးလေဝသဌာနက အမည်မဖော်လိုသူတစ်ဦးကို ကိုးကားဖော်ပြပါတယ်။
မုန်တိုင်းမကျခင် ရာသီဥတု ဆိုးရွားနေလို့ ရန်ကုန်မြစ်တွင်းမှာ သောကြာနေ့ညက သမန်တစ်စင်း မှောက်လို့ အမျိုးသမီး ၃ ယောက် သေဆုံးသွားကြောင်း ဆိပ်ကမ်းအလုပ်သမားများက ပြောကြားကြပြီး သက်ဆိုင်ရာက အရေးယူမှာစိုးလို့ ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေဆိုတာကိုတော့ အသေးစိတ် မပြောပြပါဘူး။ စနေနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ မြန်မာ့အသံရဲ့အသံလွှင့်ချက်များ ပြတ်တောက်သွားတဲ့အပြင် အစိုးရရဲ့ ၀ဒ်ဆိုက်များ ကိုလည်းပဲ ကြည့်လို့မရဘူးလို့ အေအက်ဖ်ပီက ဆိုပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ရန်ကုန်မြို့အပါအ၀င် ရန်ကုန်မြို့အပါအ၀င် တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ၅ ခုမှာ လေပြင်းမုန်တိုင်း ကျရောက်နေကြောင်း ရုပ်သံလွှင့်က ကြေညာလာတယ်လို့ သတင်းများ ၀င် လာပါတယ်။ အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်လို့ အပျက်အဆီး ဘယ်လောက် ရှိတယ်ဆိုတာကို အခုလောလောဆယ် မသိနိုင်သေးဘူးလို့ အိုင်စီအာစီ နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ချုပ်က ကြေညာပါတယ်။
မြန်မာ့ရုပ်သံလွှင့်ရဲ့ ကြေညာချက်အရ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရတဲ့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ၅ ခုကတော့ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ မွန်ပြည်နယ်နဲ့ ကရင်ပြည်နယ်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မုန်တိုင်းဟာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အရှေ့မြောက်ဖက်ကို ရွေ့လျားပြီးတော့ ၂၄ နာရီအတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံဖက်ကို ၀င်ရောက်သွားပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
ရန်ကုန်တမြို့လုံးနီးပါး လုံးဝ ပျက်ဆီးသွားပြီးတော့ ဧရာဝတီတိုင်းမှာ အပျက်အဆီး အသေအပျောက်များ ရှိနိုင်ကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်းမှာ ဟိုင်းကြီးကျွန်း၊ ပုသိမ်၊ မြောင်းမြ၊ လက်ပွတ်တာ၊ မော်လမြိုင်ကျွန်း၊ ကြုံမငေး၊ ဘိုကလေး၊ ချောင်းသာ၊ ငသိုင်းချောင်း စတဲ့မြို့နယ်များ ပါဝင်ကြောင်း ဆင်ဝှါ သတင်းအေဂျင်စီက ဖော်ပြပါတယ်။
သတင်းကိုးကားမှု VOA ၊ AP ၊ DVB ၊ Aljezeera ၊ ဟစ်တိုင် ၊ နစ်နေမန်း၊ ဆုံဆည်းရာ
Posted in: Myanmar News,Myanmar Weather News,News,Photo,Video